Apple inowedzera kugadzirwa kwe iPhone SE | IPhone nhau
Iko kudiwa kwekutanga kweiyo iPhone SE yakashamisa munhu wese, kusanganisira Apple. Zvakawanda zvekuti, sekureva kwenhau dzeTaiwan DigiTimes, kambani inotungamirwa naTim Cook yakamanikidzwa kuwedzera kugadzirwa kweiyo yekupedzisira 4-inch iPhone kusvika mhuri yeApple. DigiTimes inodoma zvinyorwa zveindasitiri uye inovimbisa izvozvo Apple yakawedzera odha yeiyo iPhone SE yemamirioni 3.5-4 iyo yavakange varonga pakutanga kune mamirioni mashanu mayuniti.
DigiTimes zvinyorwa zvakare zvinodaro chip inorayira yeiyo iPhone SE yekota yechitatu ya2016 ichave yakafanana neiyo yekota yechipiri, zvinoreva kuti kubudirira kwazvino kwe iPhone SE hachisi chinhu chisina kujairika chiri kuitika nekutangisa kwechigadzirwa chitsva. Uye, kunyangwe vazhinji vedu takafunga kuti makuru masikirini anga abvisa zvidzitiro zvidiki, hapana vashoma vashandisi vanosarudza chishandiso chinogadzirika nekuda kwehukuru hwayo.
Iyo iPhone SE inotengesa zvirinani pane zvaitarisirwa
Kunyangwe iyo iPhone 6s iine akakosha matsva senge iyo 12Mpx kamera kana iyo 3D Kubata skrini, mutengo wayo haukoke kumutsidzira iyo smartphone kune varidzi veiyo iPhone 6. Tinogona kutaura kuti iyo iPhone SE ndeye iPhone 6s yakaderedzwa muhukuru ne a yakanyanya kukwikwidza mutengo, sekureba sekunge mamwe mapoinzi akaita semberi kamera kana iyo 3D Bata skrini haifungi. Iyo iPhone ine simba reiyo iPhone 6s pamutengo we € 489 inogona kunge iri imwe yezvikonzero nei kudiwa kwayo kwave kwakakwira zvakanyanya. Zvakare, zvingangoita kuti vatengi vazhinji veIPE SE vanga varonga kutenga iyo iPhone 6s kudzamara iyo nguva yavakadzidza nezvayo kuwedzera kwemutengo, saka havana kukwanisa kuramba kutenga zvimwe kana zvishoma zvakafanana nemari shoma pavakapa modhi nyowani munaKurume. .
Chimwe chikonzero chingangodaro nei iyo iPhone SE iri kutengesa zvakanyanyisa ndeyekuti ndiyo chakasimba kwazvo chepakati-renji chigadzirwa pamusika. Kana tikazvienzanisa neimwe yepakati-renji, iyo iPhone SE ine yayo A9 processor uye M9 co-processor uye yayo 2GB ye RAM inogadzira iyi nyowani diki mudziyo wekufunga nezvayo. Chero zvazvingaitika, kutengesa kwakanaka kweiyo iPhone SE hakuna kutadzisa manhamba eApple kudonha kekutanga kubva 2013, asi Tim Cook anovimbisa kuti tichaona nhau dzakakosha munaGunyana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone SE » Apple inomutsa kugadzirwa kwe iPhone SE kuzadzikisa kudiwa
Deadpool inochinja iyo US iTunes Chitoro